नेपालकै बैज्ञानिक महावीर पुनले बनाएको इलेक्ट्रिक कार केहि दिनमै नेपाली रोडमा गुड्ने [सम्मानको लागी एक शेयर गरौँ] – Nepal Insider
यी हुन् प्रहरीको ह त्यामा सं’लग्न ७ जना आ’रोपी, प्रहरीले गर्यो सार्वजनिक
रमेश प्रसाईँको बस्यो माया, चोर्न सफल भईन् यी गायिकाले रमेशको मन
वयानमा उनीहरुले भने, ‘सुरुमा जवान त्यस पछि असईको ह’ त्या गरेर नदिमा फाल्यौ’
अत्यन्तै दु:खद खबर !! भर्खरै ! सं’कटकाल र क’र्फ्यु लाग्नेबारे गृहमन्त्रालयले जारी गर्यो यस्तो विज्ञप्ती
मजदुरका लागि के दशैँ , के तिहार ! न काम पाइयो , न राज्यले दु :ख देख्यो !
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेपालकै बैज्ञानिक महावीर पुनले बनाएको इलेक्ट्रिक कार केहि दिनमै नेपाली रोडमा गुड्ने [सम्मानको लागी एक शेयर गरौँ]
काठमाडौँ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सुरु गरेको पुराना डिजेल पेट्रोल गाडीलाई इलेक्ट्रीक बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केन्द्रले पुराना गाडीलाई इलेक्ट्रीकमा परिवर्तन गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको थियो । यो भन्दा अगाडि महाबीर पुनले कोरोना वि’रामीहरूसम्म खाना र मेडिकल सामान लिएर पुग्ने रोबर्ट र डाक्टर तथा नर्सहरूका लागि पिपिइ सकेत तैयार गरिसकेका छन् ।अहिले हामीले सबै काम सकेका छौं । त्यसको लागि आवश्यक पर्ने केही पार्टस चीनबाट मगाएका थियौं । त्यो भन्सारमा आएर रोकिएको छ ।
ती सामान आउनासाथ त्यसको परिक्षण सुरु हुने छ’, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले भने ।पुनका अनुसार नेपालमा रहेका सबै पुराना गाडीलाई इलेक्ट्रीकमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ । त्यसले पैसा बाहिर जानबाट जोगाउछ भने विद्युत उपभोग बढाउँछ । ‘मैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरेको छु । त्यो काम प्राधिकरणबाटै हुन सक्यो भने राम्रो संदेश जान्छ । अहिले प्राधिकरणसँग थुप्रै पुराना गाडी छन्’, पुनले भने ।
त्यसको लागि प्राधिरकण प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिंगसँग आफुले कुरा गरिरहेको पुनले जानकारी दिए । सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत पुराना सवारीसाधनलाई इलेक्ट्रीमा परिमार्जन गर्न ल्याउने पार्टसमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले पुराना गाडीलाई इलेक्ट्रीकमा रुपान्तरण गर्न केही भएपनि सहयोग पुग्ने छ ।
पुन भन्छन्, ‘अहिलेको हाम्रो कानुनमा केही परिमार्जन गर्नु पर्छ । यसरी मोडिफाई गरेर तयार भएका गाडीको सुरक्षा परिक्षण गर्ने र सडकमा चलाउन लायक भए नभएको सरकारले हेर्नु पर्छ ।’ पुनले भने जस्तै व्यवस्थित रुपमा कानुन बनाएर गाडी मोडिफाई गर्न दिने हो भने इलेक्ट्रीक सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन सक्ने देखिन्छ । यी गाडीलाई मोडिफाई गर्न कठिन नभएको पुनको भनाई छ । राम्रो ग्यारेज संचालकले सजिलै गाडी परिमार्जन गर्न सक्छ ।
‘मोदीले बुद्ध भारतका हुन् भन्दा गलत नहुने, ओलीले राम नेपालका हुन् भन्दा गलत हुने?’
भारतीय जनता पार्टीका नेतालाई गगन थापाको पत्र, के छ पत्रमा ?